Namuhla, imikhiqizo gel for nail eshisayo asebenzayo netibali varnishes ezivamile. Babe they ukugwazela? Ngokungangabazeki, amelana more ukugqoka, abe Iphalethi ezihlukahlukene. Gel sula "Vogue" luye lwaba owaziwa emkhakheni Neil umkhakha. Timphawu ozokhuluma kabanzi.
Ukuqiniseka manicure ephelele
Wonke umuntu wesifazane ufuna izinzipho zakhe zazihlale zisesimweni esikahle. Kodwa ngisho nalapho inakekelwa kahle varnishes evamile alikwazi ku nje kungaba si. Gel sula "Vogue" - okunye okukhulu ezibizayo. It ikhiqizwa eRussia, kodwa kungase kutholakale ubuchwepheshe baseJalimane.
Bottle ukuvenisha kukhishelwa nomthamo 10 ml. Ngokungangabazeki, lokhu kungesinye a plus elikhulu, kusukela abakhiqizi abaningi manje zobuqili inciphise okuqukethwe, ngaphandle kokushintsha intengo.
I cap kule lacquer senziwa okudala kakhulu - a rosebud, ukuze ukwazi kalula lihlukaniswe imikhiqizo yezinye izinkampani.
Gel sula "Vogue" e ukungaguquguquki salo ngempela obukhulu, kodwa akusilona iphutha lakhe. ibhulashi Kalula kuyasiza ngokulinganayo ayihambise kwi plate nail.
Unqume ukuthenga gel lacquer, kodwa abazi ukuthi yini ukukhetha? Khona-ke wena unethuba ukusizakala izincomo zethu.
Izinzuzo nezingozi nebubi ka "Vogue" gel nail Polish:
ukuthungwa aminyene. Lokhu ukuvenisha uwela ngokuphelele nail futhi ngokushesha omisiwe e isibani UV. Ungakhohlwa ukusetshenziswa isizinda kanye phezulu, ezizohlinzeka bafake eside.
Ukungabi bikho imifantu futhi chips izinsuku 10.
Iphalethi Wide emelelwa hhayi kuphela iparele zakudala noma koqweqwe lwawo, kodwa lokhu manje umthunzi ethandwa "Cat sika Eye".
Ibhajethi kubiza: I-ibhodlela 10 ml kuzodingeka akhokhe ruble 300 kuya 400.
Gel sula "Vogue" is kuhlangene eziningi ezinengilazi eziyisisekelo futhi top-sekupheleni.
Hhayi "strip" futhi ayidingi isicelo ezelekene. Kodwa abathengi bathi umbala okhanyayo kusafanele uwasebenzise izindlela eziningana. Lokhu kuyadingeka ngenxa yokuthi ukuthi saturation iyashintsha iyaphupha ibe anemibala kwelinye ungqimba akubonakali.
It is kalula isuswe ngu izindlela ezikhethekile ngesisekelo acetone futhi ngaleyo ndlela akusho bonakalise ipuleti nail.
Kungani kufanele sibheke imikhiqizo wale nkampani? Well, okungenani ngenxa nail ijeli "Vogue" has Izibuyekezo ikakhulukazi omuhle. Ngentengo sincane, akayena kunabayeni ezibizayo. shades Trendy nail sula uzokwenza manicure amahle okukhethekile, okuzoba eside sicela kuwe izinga, ukukhanya futhi zikhanyise!
Manicure Pink: incazelo, ukulungiselela kanye imibono
Sterilizer Glasperlenovy - isiqinisekiso ephephile nail ukwelashwa
Indlela Yokwenza manicure French ekhaya ilula futhi kulula
Manicure e brown nemibala: imibono. ushokoledi manicure
Yimuphi i-oven engcono - igesi noma ugesi? Yimuphi i-oven yokukhetha - igesi noma ugesi?
Ngemva ufaka i-Windows 7 ukuthi ungasetha kanjani i-Internet: imfundo
Modern "Opel Astra" emzimbeni entsha
Imfundiso yokuziphendukela okungenzeka. Amathuba umcimbi, umcimbi ngezikhathi ezithile (okungenzeka theory). ngentuthuko Independent futhi akuhambisani imfundiso yokuziphendukela okungenzeka
Heroes & okuvamile: nezidingo zomshini futhi ekuhlaziyeni
Ngamaketanga Key lobuhlalu. strawberry ukwelukwa isikimu
Isithandane sokugeza "i-Feringer": incazelo, abanikazi izibuyekezo, izici